MAGRO BEHORIRIKA : AOKA ISIKA HO MAILO – MyDago.com aime Madagascar
Na dia eo aza ny antsonjay ataon’ny fat ny Ankolafy Ravalomanana, dia mitohy hatrany ny hetsika etsy amin’ny Magro Behoririka androany. Tsy kivy ireo vahoaka mpomba ny Filoha Ravalomanana amin’ny fanohizana izany tolona izany. Anisan’ny nandray fitenenana teny an-toerana ny Cst Randrianjatovo Henri,izay nanambara fa nisy ny valim-bavaka izay natoantsika teto an-kianja. Efa manaonao foana hoy izy ireny olona ireny amin’izao fotoana izao. Ny ankamaroan’ireo olona manodidina an’i Rajoelina hoy izy dia mpanao politika mpanongam-panjakana na teto an-toerana na tany ivelany. Noho izany dia aoka isika hahafantatra tsara, fa na hangalatra départ aza izy ireo dia tsy matahotra isika. Aoka isika ho mailo hoy Henri fa ny antsika izany miverina amin’ny ara-dalàna izany dia fifidianana sy ny fiverenan’ny filoha Ravalomanana eto. Ny Ct Sakira kosa dia nanambara fa androany dia mankalaza ny andron’ny vehivavy Afrikana isika. Tsy vao nisy herinandro akory anefa izay hoy izy dia ireny tamin’ny Zoma ireny no nataon’ny fat. Dia mbola sahy hilaza ve izy ireo fa mankalaza izany i Madagasikara. Voalaza ao anatin’ny satan’ny firenena Mikambana anefa hoy Sakira izany fanajana ny zon’olombelona izany. Tsy voahaja hoy ity olomboatendry ity, ny lalàna tamin’ity fitondran-dRajoelina ity, fa nosakanana ramatoa Lalao Ravalomanana. Ankoatra izay dia nambarany fa miandry an-dRajoelina ny mpiasam-panjakana any Besalampy, satria hatramin’izao dia mbola tsy voaefa ny « bon de caisse » ho azy ireo. Ny Cst Fanatera Longin kosa dia nilaza fa nandritra izay telo taona mahery nitolomantsika teto niaraka tamin’ny filoha Ravalomanana. Nikabary foana ny tenako hoy izy fa tsy mbola nanonona ny anaran’i Reboza Julien ho mpanongam-panjakana. Androany kosa dia tsy maintsy hiteny izany ny tenako. Nitokana rano tany Beloha Androy hoy Longin izy ireo ary nilaza fa tandremo rahampitso dia miteny ianareo fa nanao io fotondrafitrasa io fa Rajoelina no nahavita izany. Ny any Beloha hoy Longin dia tsy misy mpifanandrina aminy afa tsy ny Ankolafy Ravalomanana, ka ny tenako no tiany holazaina amin’izany. Raha tena lehilahy Reboza hoy izy dia mifanatrika mivantana amiko miresaka fa tsy any am-badika any.Io paompin-drano notokanan io hoy ity olomboantendry ity dia nitarina fotsiny, fa te hanao fampielazan-kevitra mialoha izy ireo. Namafisny fa ny vahoaka any Beloha dia tsy mahalala an-dRajoelina izany. Ny kaomina tany an-toerana no manao ny fotondrafitrasa hoy izy fa tsy izy ireo. NY tenanay hoy Longin dia tsy malaina ary tsy tia tena amin’ny zavatra mahasoa ny vahoaka fa aoka ho tenenina ny marina. Ampahafirin’ny zavabitan’ny filoha Ravalomanana tany an-toerana anefa izany ka hireharehanareo. Ny vahoakan’ny Beloha dia tsy hovoafitakareo na oviana na oviana.
Auteur Solo Razafy*Publié le 31 juillet 2012 31 juillet 2012 Catégories Politique
2 réflexions sur « MAGRO BEHORIRIKA : AOKA ISIKA HO MAILO »
2 août 2012 à 8 h 35 min
3 août 2012 à 23 h 39 min
VELOMY ,OMEO AINA VAOVAO NY FIARAHA-MONINA MBA HAFAHANTSIKA MIAINA AM-PILAMINANA ARY AMIN’NY FAMPANDROSOANA NY TOEKARENA SY
FANATSARANA NY FARI-PIAINANTSIKA !
Diniho akaiky ange ny fihazakazaky ny paolitika nisy teto Amintsika telo taoana mahery izay !
Nizakazaka anie ireo nanongam-panjakana , nizahozaho ireto miaramila voatamby ,ary nihevitra fa izy ireo no mitondra ny Firenena ,satria izy ireo no antsoin’ireo milaza azy ho mafy be , be saina satria any amin’ny vola ,ny mpitandro ny filaminana ,izay tsy ny filaminana no namakiany loha fa fahafefana azon’izy ireo noho ny basy eny an-tanany !
Nisy izany ireo tompon’ny fahefana ,ireo nanjakazaka satria mitsikera vola ary manao izay tiany atao ( manolana vehivavy , mamaky trano , manendaka , … ary tsy misy fanjakana manenjika ireny miaramila jiolahy ireny !
Ireo mihambo hoe manambonihahitra izay miravaka laiton dia mihevitra azy fa amony dia ambony ka tsy tsy ho tratry ny aloka ,tsy ho lena rehefa avy ny tondra-drano , izay tsy manahy satria mahita ho hanina foana raha tsy mahita atelina aza ny Malagas ..
Iarahantsika niaina izany fahasahiranana izany ..
Izao ankehitriny anefa toa misy milefitra ,misy ireo niseho nisehoseho no toa lasa nangina sy iva feo !
Indrindra moa ireo mpanao paolifika ,izay namono vorona , nampiseho ny fahefana eo an-tanany !
Ankehitriny dia mamorona , milaza atsanga tsy aman’orana , manao zavatra tsy marina mba hanomezany toky ny tenany ,na dia ita sy tsapa izao fa…tankina ny fidiramèbola mora azo , yapitra ny baiko nomen’ny frantsay sy ny karana ary ireo malagasy nivarotra ny fanahiny sy ny hasiny ,nivarotra ny vadiny sy ny zanany vavy !
Nankaiza ireo mpanao porizenirra manaraka ministra , maaraka olona miseho ho lehibe mitaingina 4X4 ? Nankaza ireo mpiseho hery mameno camlons telo na efatra mandeha hampitahotra Malagasy mivory ?
Jereo akaiky anie ity sary asehoko Anareo ity é!
I rajoelina dia nanenjika ny Filoha RAVALOMANANA MARC ,nanohitra ny fiverenana eto Antanindrazana ! Na izy na olon-kafa no nibaiko ireny dia izao ireo dia niforitra ary nanaiky ny hihaona amin’ny Filoha RAVALOMANANA MARC , izay nokasain’izy ireo hajedaka !
Izao anefa manaiky ny fihaonana ,izay ny Filoha RAVALOMANANA MARC no nangataka ny fisiany !
Mba ataovy an-tsaina anie izany mpihaza ,tsy nahafaty haza , dia mody migonongonona ,fa tsy nahafaty haza na voronkely aza !
Ireo mpanongam-panjakana , izay i rajoelina nosarobakoliny , fanirakirany … Jereo ireto izy itangorina , mangilanètsofina te -hahalala ny vokatr’ity fihaonana , izay azon’izy ireo intsony elingelenina na sakantsakanana….! Nankaiza ny fahefana nahindrahindra sy nisekosekoana ? aiza ireto miaramila frantsay sy ny olon’i sarkozy ?
Kodiaran-tsarety tokoa ny fiainana !
rajoelina , any sisa heriny ,dia mano herisetra ,mandika ny lalàna iraisam-pirenena mifehy ny sisin-tany ( loi international régissant les frontières ). Mety vokatry ny tsy fahaizana izany lalàna izany no niteraka ny voina nahazo an’i Ramatoa RAVLMANANA LALO SY NY ZANANY !
Nefa i rajoelina dia mihevitra fa tena paika paolitika lehibe iny seho-javatra iny !
Dia paipaika toa izany sisa no ,
aroson-drajoelina ,saingy izy tsy miseho fa baiko tsy nosoratana no omeny : toa izany ny fandrarana ny praiministra tsy mahazo miseho na miteny amin’ny radio sy ny tv !
Miafina ao ambadiky ny mpiara-miasa aminy izy ! Tsy misy mpitondra intsony ,tsy misy fanajana lalàna , tsy Firenena intsny !!
Izay no vokatry ny fanonganam-panjakana nomanin’ny frantsay sy ireo mpanohitra ny Filoha RAVALOMANANA MARC tamin’ny 17 mars 2009 !
NY OLON-DRATSY , NY FANAHY RATSY NITARIKA IREO OLONA NITADY NANGALATRA NY HARENA ,NITADY NAMETSIFETSY NY MALAGASY KA NAMPANANTENA AZY FIOVANA FAHAFAHANA , DEMOCRATIE ,NEFA DIA NY NAMENO NY PAOSINY NO NIEZAHANY NIARAKA SY NANAMPY IREO VAHINY NANDROBA NY FIRENENA !
LASA IREO VAHINY IREO SATRIA NIOVA NY FITONDRANA ANY FRANTSA.., DIA IZANY NO MAHATONGA IRETO JIOLAHY NIARAKA TAMIN’NY FRANTSAY NANONGAM-PANJAKANA HO MILEFITRA , IVA FEO ARY ATOATO DIA HIFEZAKA ARY LASA BIRIKY LANY ZORO DIA HIVERINA AMIN’NY MAHABAINGA AZY !
Ery ampiandoana aho dia niteny fa mihazakazaka ny fiovana paolitika eto Msikara;;Kodiaran-tsarety ny fiainana ! Mihodina ary ireo tery ambony dia hikodia ery ambany !
Ahoana ny fomba sy fihetsika tokony hataontsika mba hiala aingana amin’izao korontana , fahasahiranana , hanohanana , zaza tsy an-dakilasy , tsy fahasalaana..?
TSY MAINTSY MITAFYFANAHY MATANJAKA ISIKA ! TSY MAINTSY MANANTSARA NY FIARAHA-MONINA ISIKA MALAGASY ARY AO ANATIN’IZANY FIARAHA-MONINA IA TSY MAINTSY MIFANAMPY SY MIFANOHANA ISIKA !
ENY HISY IREO ASA HIVERINA ! HISY NY FANITARANA NY FAMBOLENA INDRINDRA NY FAMBOLEM-BARY SY NY HANIN-KOTRANA ! ETO FRANTSA AHO DIA TSY MAINTSY MIHINANA NA MANGAHAZO NA SAONJO MIARAKA AMIN’NY HENA ISAN-KERIN’ANDRO MBA HAMPIHENANA NY FIHINANAM-BARY ,IZAY LAFO TOKOA NY FAMBOLENA AZY ( manetsa , mamboly , mijinja , mitango ny vaom-bary , manahy , mamotsy ,mampiditraan-tsopitra !)!
IO FITAFIANA FANAHY MATANJAKA IO NO HANDRESENTSIKA NY RATSY ? NO HANATSARA NY FIHAVANANA ARY HAMPIVERINA NY MAHA MALAGASY ANTSIKA MARINA !
Précédent Article précédent : MISY MISANDOKA NY SADC
Suivant Article suivant : FANAMBARANA MIKASIKA NY FIKASAN-DRTOA LALAO RAVALOMANANA HODY ETO MADAGASIKARA